1 Samuel 28 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 28:1-25
Saul kohuu ɔkɔmfo bea bi wɔ En-Dor (1-25)
28 Saa bere no, Filistifo boaboaa wɔn asraafodɔm ano sɛ wɔne Israel rekɔko.+ Enti Akis ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Wunim paa sɛ wo ne wo mmarima no nyinaa, ɛsɛ sɛ mobɛka me ho wɔ ɔko no mu.”+ 2 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Akis sɛ: “Wo ara wunim nea w’akoa bɛyɛ.” Akis ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Ɛno nti me nso mɛyɛ wo m’awɛmfo so panyin.”*+ 3 Ná Samuel awu ama Israel nyinaa asu no, na na wɔasie no wɔ ne kurom Rama.+ Ná Saul nso atu akɔmfo ne asumanfo ase afi asaase no so.+ 4 Filistifo no boaboaa wɔn ho ano, na wɔkɔsoɛɛ Sunem.+ Enti Saul nso boaboaa Israel nyinaa ano, na wɔkɔsoɛɛ Gilboa.+ 5 Bere a Saul huu Filistifo dɔm no, ehu kaa no na ne koma tui papaapa.+ 6 Saul bisaa Yehowa anom asɛm,+ nanso Yehowa amfa ɔdae, Urim,*+ anaa adiyifo so amma no mmuae. 7 Afei Saul ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ: “Monkɔhwehwɛ ɔkɔmfo bea bi mma me,+ na menkɔ ne hɔ abisa.” Na ne nkoa no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, ɔkɔmfo bea bi wɔ En-Dor.”+ 8 Enti Saul sakraa ne ho hyɛɛ ntaade foforo, na ɔne ne mmarima no baanu siim kɔɔ ɔbea no nkyɛn anadwo. Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, yɛ nyankomade+ ma onipa a mɛbɔ ne din akyerɛ wo no mmra.” 9 Nanso ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Wunim sɛ Saul atu akɔmfo ne asumanfo ase afi asaase yi so.+ Enti adɛn na worebesum me afiri* ama wɔakum me?”+ 10 Ɛnna Saul kaa no ntam wɔ Yehowa din mu sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi, obiara remmu wo fɔ wɔ asɛm yi mu!” 11 Afei ɔbea no bisae sɛ: “Hena na wopɛ sɛ mema ɔba?” Na ɔkae sɛ: “Ma Samuel mmra.” 12 Bere a ɔbea no huu “Samuel”*+ no, ofii ase teɛteɛɛm, na obisaa Saul sɛ: “Wone Saul na woadaadaa me yi?” 13 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro. Dɛn na woahu?” Na ɔka kyerɛɛ Saul sɛ: “Mihu obi a ɔte sɛ onyame sɛ ofi asaase ase reba.” 14 Ɛhɔ ara na obisaa ɔbea no sɛ: “Ɔte dɛn?” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛyɛ akwakoraa bi a ɔhyɛ ataade nsasin.”+ Ɛnna Saul hui sɛ ɛyɛ “Samuel,” na ɔbɔɔ ne mu ase kotow de n’anim butuw fam. 15 Na “Samuel” bisaa Saul sɛ: “Adɛn na woama wɔafrɛ me rebegyigye me?” Ɛnna Saul kae sɛ: “Me ho akyere me paa. Filistifo ne me reko, na Onyankopɔn nso apo me na ommua me bio; ɔmfa adiyifo anaa dae so nkasa nkyerɛ me.+ Ɛno nti na meresrɛ wo sɛ kyerɛ me nea menyɛ no.”+ 16 Ɛnna “Samuel” kae sɛ: “Sɛ Yehowa apo wo ma woabɛyɛ ne tamfo+ a, ɛnde worehwehwɛ m’akyi kwan ayɛ dɛn? 17 Nea Yehowa nam me so kae no, ɔbɛma aba mu; Yehowa behwim ahenni no afi wo nsam na ɔde ama wo yɔnko Dawid.+ 18 Woantie Yehowa nne, na n’abufuw a etia Amalek no nso, woanyɛ ho adwuma;+ ɛno nti na nnɛ Yehowa reyɛ wo saa yi. 19 Wo ne Israelfo nso, Yehowa de mo bɛhyɛ Filistifo nsa,+ na ɔkyena, wo+ ne wo mma+ bɛba abɛka me ho. Israel asraafo nso, Yehowa de wɔn bɛhyɛ Filistifo nsa.”+ 20 Ɛhɔ ara na “Samuel” asɛm no nti, Saul twa hwee fam, na osuroe papaapa. Afei nso, na ahoɔden bi nni ne mu, efisɛ da mu no nyinaa ne anadwo mu no nyinaa na onnidii. 21 Bere a ɔbea no baa Saul nkyɛn behui sɛ asɛm no ahaw no paa no, ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, w’afenaa atie wo nne, na mede me nkwa* ato me nsam+ ayɛ nea wokae no. 22 Enti afei mesrɛ wo, tie w’afenaa nne na ma memfa paanoo kakra mmesi w’anim na di, na woanya ahoɔden de akɔ wo kwan.” 23 Nanso wampene, na ɔkae sɛ: “Merennidi.” Na ne nkoa ne ɔbea no srɛɛ no ara. Afei otiee wɔn, na ɔsɔre fii fam tenaa mpa so. 24 Ná ɔbea no wɔ nantwi ba kɛse bi wɔ fie hɔ. Enti ɔyɛɛ ntɛm kum no,* na ɔfaa esiam fɔtɔw de tõõ paanoo a mmɔkaw* nnim. 25 Ɔde maa Saul ne ne nkoa no na wodii. Ɛnna wɔsɔree, na anadwo no wosiim kɔe.+
^ Nt., “mede wo besi me ti so ɔwɛmfo daa.”
^ Anaa “me kra afiri.”
^ Anaa “obi a wayɛ sɛ Samuel.”
^ Anaa “de bɔɔ afɔre.”